Ofwa nke Warcraft - WRSP
WA nke oge WARCRAFT
1994: Warcraft: Orcs & ansmụ mmadụ, a wepụtara usoro egwuregwu nke ndị egwuregwu abụọ nwere ike ịsọ mpi n'ịntanetị, wepụtara.
1995: Warcraft nke Abụọ, a tọhapụrụ mbipụta dị elu nke egwuregwu mbụ, na-enweta mmụba n'afọ na-esote.
2002: Warcraft III: Ọchịchị nke Ọgba aghara weputara, na-agbanwe rue otutu ndi na eme otutu ihe, egwu egwu na ntaneti.
2004: World nke Warcraft wepụtara, na-enye ọtụtụ puku ndị egwuregwu ohere imekọrịta n'ime nnukwu ụwa mebere akpọrọ "mpaghara" ma mesịa nwee ọtụtụ narị ala maka mpaghara dị iche iche nke ụwa na asụsụ anyị.
2007: Ofwa nke Warcraft: Ọkụ Na-ere Ọkụ eweputara, mmeba nke gbakwunyere otu kọntinent na ala nke nke mbu.
2008: Nnukwu ogbako sayensị nke mbụ emere n'ime egwuregwu egwuregwu na-ewere ọnọdụ, na-agba ume site na Science magazin, n'ụbọchị atọ n'ebe atọ dị na World nke Warcraft.
2010: Ofwa nke Warcraft: Cataclysm, mgbasa nke atọ, gbanwetụrụ ọdịdị ala mbụ wee bido ịtụgharị uche nke egwuregwu site na akụkọ na ịrụ ọrụ na mbupụ.
2016: Ofwa nke Warcraft: Legion, mmeba nke isii, gbakwunyere klaasị ndị mmụọ ọjọọ dinta nke avatars ndị dike.
2018: Ofwa nke Warcraft: Agha maka Azeroth, Mgbasa nke asaa, gbanwere ụfọdụ iwu na-achịkwa ọgụ dị n'etiti ndị na-egwu egwu.
2019: Ofwa nke Warcraft Omuma wepụtara ya na WW mgbe niile, na-emegharị egwuregwu mbụ dị ka ọ dị ozugbo tupu mgbasa mbụ.
Kemgbe Renaissance, ụfọdụ ụdị nka na agụmagụ nke ọdịbendị ọdịda anyanwụ abanyela n'okpukpe "Pagan" oge ochie na okpukpe na-eche n'echiche nke ndị edemede oge a kere. Ka ịgbasochi echiche ụwa anya, o yiri ka ọnụ ọgụgụ na-ebuwanye ibu nke ndị mmadụ hà na-achọ inweta okpukpe ndị e chepụtara echepụta n’enweghị okwukwe n’ebe ha nọ. Na 1817, Samuel Taylor Coleridge kwuru na nkà na akwụkwọ ndị ahụ chọrọ “ka a kwụsị ikwere ihe.” Otú ọ dị, n’èzí ikpere arụsị okpukpe na enweghị ezigbo ụlọ ọrụ ndị na-akwado ọdịnala okpukpe, ọdịiche dị n’etiti nkwenkwe na nkwụsịtụ nke ekweghị ekwe pụrụ ịpụ n’anya. Otu ubi nke ọdịbendị nke oge a ebe enwere ike nyochaa nkwupụta a bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu (MMOs), ọkachasị World nke Warcraft (WoW) nke na - egosipụta okpukperechi okike nke ewepụtara na Onwa Ọnwa, Elune (Bainbridge 2010b).
Redị MMO sitere na mmepe okike na 1970s, nke doro anya na egwuregwu tabletop, Dungeons na Dragons (Gygax 1979) na MUDs ma ọ bụ ọtụtụ dungeons ndị ọrụ bụ egwuregwu dị n'ịntanetị dị ka D&D tinyere ihe na akụkọ (Bartle 2004; Castronova 2005). Onye nke gụsịrị akwụkwọ na UCLA nke izizi guzobere na 1991, mmepe mmepe ngwa ngwa guzobere Blizzard Entertainment dị ka isi ike na ụlọ ọrụ egwuregwu site na mwepụta 1994 nke mbụ Warcraft egwuregwu, dị ka akọwara na ibe ụlọ ọrụ Wikipedia. Na-anọghị na mbụ, okpukpe Elune pụtara na nkwadebe maka WoW MMO.
Ndị mmepe nke WoW enweghị ebumnuche okpukpe doro anya n'ịmepụta akụkọ ifo ha, mana ha webatara ọdịbendị na-adịkarị na nke ha bụ. Ma, mgbe ụfọdụ, ha na-ekwupụta echiche nke ha. Otu ihe atụ bụ novelette “nke Ọbara na Sọpụrụ” nke otu onye isi na-ese ihe bụ Chris Metzen (2002) dere. Ọ na-akọ akụkọ miri emi na-eche banyere Tirion Fordring, mmadụ aristocrat onye zutere Orc hermit na mberede, nke dugara n'ọgụ ozugbo n'ihi na ha bụ ndị iro buru ibu, rue mgbe ọghọm akụkụ nke ụlọ elu dara ada dakwasịrị Tirion, na-eme ka ọ ghara ịma onwe ya. Orc lere ya anya dị ka onye ihe ihere igbu onye iro na-enweghị ikike, ya mere Tirion laghachiri n'ụlọ ya n'enweghị nsogbu ọ bụla nke ikpebi ma ọ ga-edebe ọnọdụ Orc ahụ, ma ọ bụ hapụ ya ka ọ gbuo dịka ndị ọzọ niile. Na aha ahụ, “ọbara” na-anọchite anya ụkpụrụ omume zuru oke, ịchọ ọdịmma maka agbụrụ mmadụ nanị, na “nsọpụrụ” na-anọchi anya ịgbaso usoro iwu nke usoro iwu na-adịghị adị. Ihe omuma di iche di iche iche gunyere Orc, onye nwuru anwu ma dinara na Shrine of the Fallen Warrior n’elu ugwu na mpaghara Barrens nke WoW, na-anọchite anya Michel Koiter, onye okike okike nke ọrụ WW, onye nwụrụ na mberede n’afọ iri na iteghete obere oge tupu egwuregwu hapụ.
Warcraft: Orcs & ansmụ mmadụ chere na ọ bụ ndị mbata mwakpo a maara dị ka Orcs ka wakpoo mmepe mmadụ, nke nwere ike ibute mbibi sitere n'etiti ụmụ mmadụ na Orcs na Tolkien Jehova nke Mgbaaka akụkọ ifo. Ka ọdịnala ndị mepere emepe na-etolite, nnukwu ọdịiche okpukpe pụtara. Na WoW, havemụ mmadụ nwere okpukpe ahaziri nke ọma na ndị ụkọchukwu, ebe Orcs nwere anwansi nke ọkara nke ndị mmụọ. Versionsdị abụọ nke Warcraft nke Abụọ agbakwunyere na akụkọ ihe mere eme nke agha nke agbụrụ abụọ ndị a, mgbe Warcraft III gbakwunyere agbụrụ abụọ ọzọ, Undead na Night Elves, na-eguzobe ntọala maka okpukpe Elune nke Night Elves ka agbụrụ anọ ahụ gbalịsiri ike ikpebi mmekọrịta ha.
Mgbe onye ọkpụkpọ mepụtara agwa Night Elf na ụdị mbụ nke World nke Warcraft, a ghaghị ịhọrọ otu klas site na ndepụta nke ise, abụọ n'ime ha bụ ndị ọkachamara n'okpukpe: ụkọchukwu na druid (Nardi 2010). Mpaghara malitere maka Night Elves bụ agwaetiti Teldrassil, nke bụ n'ezie nnukwu osisi, nke doro anya na aha ya bụ Yggdrasil, Osisi inwa na akụkọ ifo Norse. Mgbe ọtụtụ ọrụ gachara, ọtụtụ n'ime ha gbadoro anya na nchedo gburugburu ebe obibi nke agwa, agwa a ga-aga Darnassus, bụ isi obodo Night Elf, wee gafee oke osimiri ahụ n'otu n'ime kọntinent mbụ nke ụwa buru ibu nke Azeroth.
Teldrassil bu obere uzo di n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke mpaghara Kalimdor, na Night Elves nwere mpaghara di nso na ya. Otutu Kalimdor bụ onye Orcs na otu agbụrụ dị iche aha ya bụ Tauren, ebe ụmụ mmadụ jidere obere mpaghara gburugburu obodo Theramore. Isi obodo mmadụ, Stormwind, dị n'ofe oké osimiri na Alaeze Ọwụwa Anyanwụ, ebe ha na ndị Dwarves nọ na Ironforge nwere njikọ, ma na-emegide Undead Forsaken in Undercity. Abụọ ndị na-esighi ike na mbido bụ Trolls na Gnomes. Ndị agbụrụ ahụ gbakọtara gaa n'òtù abụọ na-asọ mpi na mgbe mgbe. Mmekọrịta ndị mbụ jikọtara Night Elves, Hummụ mmadụ, Dwarves na Gnomes, ebe Horde jikọtara Orcs, Tauren, Forsaken na Trolls.
na 2007, Ọkụ na-ere ọkụ mmeba gbakwunyere kọntinent, yana agbụrụ abụọ, Draenei na Alliance na Blood Elves na Horde. Ọtụtụ mmụba ndị na-esote gbakwunyere kọntinent ma ọ bụ ìgwè nke agwaetiti, tinyere Worgen na Alliance, Goblins na Horde, na Pandaren ndị nwere ike isonye n'otu akụkụ (Bainbridge 2016: 237-60). Ka ọ na-erule afọ 2010, ihe eserese mbụ nke 2004 dị ka nke ochie nye ụfọdụ ndị nwere ike ịme egwuregwu, yabụ Nsogbu emezigharịrị kọntinenti mbụ ahụ na ndị egwuregwu ga-amalite na ha. 2018 Agha maka Azeroth mmeba agbakwunyere ókèala mana tinyekwara otu iwu na mpaghara niile. Site na mbido, ụfọdụ mpaghara gbara PvP ume ma ọ bụ ọgụ-ọgụ-egwuregwu na mpaghara niile, na-ahapụ ndị odide adịghị ike ịwakpo. Ọnọdụ ndị ọzọ "dị mma" ma belata PvP ikewapụ ogige na ebe agha. Mgbasa 2018 mere ka ala niile dị mma. 2019 Ofwa nke Warcraft Omuma ntọhapụ gbakwunyere ọtụtụ PvP ọhụrụ n'otu ụdị na usoro dị ka ndị nke mbụ afọ iri na ise tupu mgbe ahụ.
World nke Warcraft abụwo ebe a na-eme nnyocha dị ukwuu na nke mbipụta a ma ama. Na Mee 2008, e mere ogbako agụmakwụkwọ na WoW nke rụpụtara akwụkwọ nhazi akwụkwọ (Bainbridge 2010a). Na nke ọ bụla n’ime ụbọchị atọ, ihe dị ka mmadụ iri abụọ na-eso ya gbakọtara n’ebe ọzọ dị iche: ụsọ osimiri dị n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Orcmar nke Orc, nnukwu ọgba nke dịdebere isi obodo Forsaken nke Undercity, na ụlọ mkpọmkpọ ebe dara ada na nsọtụ ndịda nke oke ọhịa Stranglethorn. Otu panel duziri mkparịta ụka maka nzukọ ọ bụla, na nke ọ bụla sochiri njem, gụnyere agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke avatar abụọ n'ụbọchị ikpeazụ. A haziri panel ahụ n'ime Azeroth site na ịtọlite ​​otu guild aha ya bụ Science, na nkwado site na guild dị ugbu a Alea Iacta Est, na-enye ohere ka ekwukọrịta nkwukọrịta na ọwa ozi ederede nzuzo, nke ebudatara ọdịnaya ya na-akpaghị aka maka mbipụta na-esochi.
Ikekwe nke nkenke, chi dị iche iche na demigods na ụwa ndị a na-eche n'echiche bụ eziokwu n'echiche na okwukwe nke ụwa agaghị enwe ike ịba uru: Omume ha gara aga na ike ugbu a bụ n'ụzọ nkịtị ghọtara site na eserese na ngwanrọ. Mage nwere ike ịgbanye bọl a na-ahụ anya na nke na-emerụ ahụ nke anwansi ọkụ na avatar, ọbụlagodi dị ka onye ụkọchukwu nwere ike iji ìhè na-agwọ ọrịa nyere avatar merụrụ ahụ aka. Otu avatar nke egburu bu mmuo na-achaghi acha n’ebe a na-eli ozu, mana enwere ike ịkpọlite ​​n’ọnwụ ma onwere ego ole, maọbụ karie uru site na ịlaghachi ebe ozu ya dị. Otu n'ime agbụrụ, nke a na-akpọ ma ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ ndị agbahapụ, nwụrụ anwụ kpamkpam mana ọrịa na-egbu ya weghachitere ya ndụ, erigbu ya wee nupụrụ isi iji guzobe ọha nke ha. Ndị otu agbụrụ Worgen na klaasị Knight ahụ bịarutere na mbara nwere akụkọ yiri nke ahụ.
N'akụkụ mbara ala ahụ, ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ọkpụkpọ (NPCs) so n'òtù nzuzo ndị siri ike, na omenala ọ bụla nke avatar nwere akụkụ ụfọdụ nke okpukpe. Agbanyeghị, agbụrụ Night Elf na Tauren na-ekerịta ofufe nye okpukpe kachasị mkpa, ofufe Elune. Ọkachamara ọkachamara wiki WoWpedia na-ekwupụta, sị: “Elune bụ chi nwanyị bụ isi nke abalị elven pantheon. O jikọtara ya na nke ukwuu nke ọnwa abụọ nke Azeroth, White Lady, a na-ahụta ya dị ka nne nke Cenarius, onye nwe oke ọhịa na chi nchebe nke ndị niile druids. Elune bu otu n’ime chi ndi Azeroth zuru oke. Na omenala Tauren, a maara ya dịka Mu'sha, anya aka ekpe nke nne ala ụwa, anya aka nri ya bụ anyanwụ, An'she. ” N'adịghị ka ndị mwakpo Orc, Tauren bụ agbụrụ amaala, nke o doro anya na ọ bụ Night Elf mepere emepe, nwere mpako na ọfụma. Ha bụ ihe atụ doro anya maka ala dị larịị nke ndị America, nwere okporo osisi, nku isi, na wigwams. N'ebe a, anyị na-ahụ nwa akwụkwọ Tauren nọ ọdụ n'ụkwụ arch druid Hamuul Runetotem, na Elder Rise na Tauren obodo Thunder Bluff. [Foto dị n'aka nri]
Night Elves na Tauren nwere otu uru dị mkpa, na-ewere ọdịdị dị ka ihe dị nsọ. Ha na-eje ozi dị ka ndị na-elekọta gburugburu ebe obibi na-agwọ mmetọ ma na-agbachitere ụwa nkịtị megide nsogbu site na agbụrụ ndị ọzọ. Eleghi anya, ndị Tauren na-efekarị Earth Earth, ma nakweere Elune site na Night Elves, na-ewere ya dị ka ngosipụta nke eluigwe nke chi nwanyị ọdịnala ha. Abalị Abalị ahụ bụ akụkụ nke mmepeanya oge ochie nke diri agha dị egwu ọtụtụ puku afọ gara aga, dịka akọwara ya na akwụkwọ akụkọ atọ nke Richard Knaak (2004a, 2004b, 2005).
Emepụtara anwansi siri ike, nke enwere ike ịkọwa dị ka ihe atụ maka teknụzụ dị elu ma gbawaa kọntinent Azeroth. Na nzaghachi, Night Elves chọrọ nzọpụta n'okpukpe ọdịdị Elune. Agbanyeghị, otu ọzọ jụrụ okpukpe ma hiwe Blood Elves, ndị na-achọ ike zuru oke site na teknụzụ anwansi.
Ọganihu ọgụgụ isi nke WoW dabere na nkọwapụta nke usoro mgbagwoju anya, asọmpi asọmpi bụ ụwa nke esemokwu mebiri, ọ bụghị naanị n'etiti agbụrụ na ngalaba, kamakwa n'etiti okike (Night Elves) na teknụzụ (Blood Elves). Yabụ, otu ọrụ nke okpukperechi bụ inye ụkpụrụ bụ isi nke kọwapụtara ụfọdụ ọdịbendị, ọ bụ ezie na Onye nwe ìhè nwere ụfọdụ njirimara nkatọ, nyere na ndị na-arụ ọrụ nke Katidral nke Ìhè rụrụ arụ na mmekorita ha na ndị ọgaranya mmadụ. Na ọkwa miri emi, ebe anyị nwere ike ịtụle maka omume ndị egwuregwu, World nke Warcraft bụ akụkọ banyere ọdịda nke mmepeanya, nke okpukpe nwere ike ịbụ ihe na-akpata ma ọ bụ ọgwụgwọ.
Abalị Abụọ na Tauren na-ekenye ndị na-eme egwuregwu n'oge ka ha rụọ ọrụ ndị metụtara mkpa nke mmiri, gosipụtara n'ụzọ zuru ezu na ụdị kpochapụwo nke WoW karịa ụdị zuru ezu. NPC Tenaron Stormgrip n'ọfịs ya dị elu na osisi dị nsọ bụ Aldrassil, gwara onye mmụta bụ Night Elf: “Oge eruola ka ị malite ịchọ ọdịnihu gị. Mana tupu ị dị njikere ịbanye ụwa karịrị oke ọhịa anyị mara mma, ọtụtụ ihe ị ga-anụrịrị gbasara akụkọ ihe mere eme anyị. " Mgbe ntuziaka dị nkenke, avatar ahụ ga-ewere ihe efu efu gaa ọnwa dị nsọ n'akụkụ ugwu, wee weghachite ụfọdụ mmiri ya. “Ọ bụ ezie na enwere m ike ịgwa gị ọzọ banyere ọnwa dị iche iche na nke Teldrassil, m ga-ezitere gị gị. Corithras Ọnwa ga na-atụ anya gị. Awụnyela m mmiri mmiri ị wetara m n'ime ụgbọ mmiri a ka ị wetara ya… find ga-ahụ ya n'ọnụ ụzọ ọnwa na Dolanaar. Corithras na-enyekwu ntụziaka: [Foto dị n'aka nri] “Nke mbụ, ka m kọọrọ gị banyere ọrụ ị na-aghaghị ịrụcha. Druids ndị dị na Darnassus na-eji mmiri nke moonwells nke Teldrassil, a ga-enwerịrị ọnwa ha site n'oge ruo n'oge. Site n'iji usoro ihe mmụta a pụrụ iche, ị nwere ike ịnakọta mmiri nke ọnwa.
Ndị ọzọ zitere nwa akwụkwọ ahụ ka ọ kpọkọta mmiri site na ọnwa ndị dị na mpụga obodo Starbreeze, n'ụsọ ọdọ mmiri nke Arlithrien, na Oracle Glade. Corithras na-akọwa na osisi ụwa nọ n'oké ihe egwu:
Na-enweghị ngọzi nke Alexstrasza Life-Binder na Nozdormu nke Oge na-adịghị, uto nke Teldrassil enwebeghị ntụpọ. A kọọrọ anụ ọhịa dị iche iche na-ebili site na ala osisi ahụ, na ndị na-agba ọsọ na-agba ndị njem ọsọ. Enwere m ike ịtụ anya na a ga-achọta ihe ngwọta Arch Druid na-achọ ngwa ngwa. M ga-awụkwasị ihe ọma niile ị webatara n'ụgbọ a, ka ị bunye Darnassus.
Usoro Tauren malitere mgbe NPC aha ya bụ Mull Thunderhorn kwupụtara, sị: “Goblins na ndị na-ejere ha ozi emetọla olulu mmiri anyị dị nsọ! Anyị enweghị ike ikwe ka nke a. Iji mee ka olulu mmiri nke ọ bụla dị ọcha, m ga-emerịrị ihe mkpocha iji mee ka ọ dị ọcha, ị ga-akpọta ya n'olulu mmiri ahụ wee mee ememme nsacha. ” Avatar onye ọkpụkpọ ahụ ga-enwerịrị akụrụngwa achọrọ site na ịchụ nta anụmanụ, n'ihi na ịchụ nta nke Tauren dị nsọ. "Hchụ nta wolf wolf maka ụkwụ ha na ndị okenye toro eto maka ụta ha." Archọta arc bụ akụkụ isii, atọ n'ime ha na-achịkọta ihe omume sitere na anụmanụ, na atọ n'ime ha na-ewepụta otu ihe a na-eme site na ha gaa na olulu mmiri dị nsọ nke ndị Goblins gbara gburugburu bụ ndị a ga-egbu ka ha nwee ike ịme emume ahụ ozugbo. N'ime Azeroth, ndị Goblins bụ ndị NPCs kachasị emerụ ahụ, na-elekọta naanị uru akụ na ụba na teknụzụ ọhụụ.
Agbanyeghị na Night Elves na Tauren bụ ndị iro n'okwu nke ụwa, ndị so n'òtù ndị iro Alliance na Horde, ha na-ejikọ udo na-achịkwa mpaghara dị nsọ a na-akpọ Moonglade. N'ịbụ ndị ugwu ndị dị elu mere ka ọ dị elu, a pụghị ịbanye ebe a na-adịghị ahụkebe n'ụzọ dị mfe ma e wezụga site na ndị druids ndị nwere ike isi ebe ahụ kpọọ anwansi. Otú ọ dị, kwa afọ, a na-eme Ememme Ememme ọnwa n'ebe ahụ, ndị NPC druids nwere ike ibufe avatar ọ bụla na Moonglade, nke a na-eme udo site na udo dị nsọ. Ememe ndị ahụ chọrọ ịsọpụrụ ndị okenye na ndị nna ochie.
Ndi isi ochichi nke okpukperechi WoW bu ndi mmadu, ndi na-egwu egwu ma obu NPCs. N'etiti Night Elves, ụlọ ụka a ma ama bụ Sisterhood nke Elune, nke dị na Templelọ Nsọ nke Ọnwa na ndịda Darnassus, Night Night Elf. Tyrande Whisperwind bu onye isi nchu aja nke chi nwanyi Elune, ndi isi nile nke ndi Sisterhood bu ndi nwanyi Night Elves. Arch Druid Fandral Staghelm bi na Cenarion Enclave n'akụkụ ugwu nke Darnassus, ógbè a na-akpọ Cenarius, Onyeisi Ọhịa na onye isi nke ndị isi nwoke nke Cenarion Circle nzukọ na-eduzi druids niile n'agbanyeghị agbụrụ, dịkarịsịrị anya ebe ọ bụ na Nsogbu mmeba. Ihe oyiyi dị n'okpuru [Foto dị n'aka nri] na-egosi nkịtị Elf guzo na mbara ihu nke Templelọ Nsọ nke Ọnwa, n'etiti Malfurion Stormrage, onye mere ihe akụkọ nke druids, na Tyrande Whisperwind, onye ọ lụrụ n'oge Nsogbu.
Avatars nwere ike ịghọ ndị isi nke otu afọ ofufo a na-akpọ "guilds," mana ha enweghị ike ịbụ ndị isi nke otu dị ka Sisterhood of Elune ma ọ bụ Cenarion Circle. Agbanyeghị, klas avata anọ dị iche iche nwere mkpa nke okpukpe ma na-eje ozi dị ka ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ndị anwansi maka avatar ụwa dị ka ndị dinta ma ọ bụ ndị dike. Fọdụ klaasị ndị ọzọ nwere ikike ime anwansi, ọkachasị paladini na agha, mana ha dị ka ndị anaghị emecha ihe gbasara okpukpe. Mgbe onye ọkpụkpọ na-ekepụta avatar ọhụrụ, a na-enye nkọwa ndị a nke klaasị klaasị anọ, ụkọchukwu, druid, shaman na mage:
Ndị ụkọchukwu na-eduzi ọdịnihu ime mmụọ nke ndị ha. Site na nghota ha puru iche n’ime uche ahu, ha n’enwe ike idozi nkwenkwe mmadu n’otu, ma o bu inye ya obi uto ma o bu itu ujo, wetuo obi ma obu ichikota, ogwugwo ma obu ojoo. Dị nnọọ ka obi nwere ike ijide ma ọchịchịrị ma ìhè, ndị ụkọchukwu na-eji ike okike na mbibi eme ihe site n'itinye ikike siri ike dị n'okwukwe.
Druids bi na ọnọdụ nke enweghị atụ na njikọ na okike. N'ịbụ ndị ejikọtara ha na osisi na anụmanụ, ha bụ ndị na-akpụzi ihe dị iche iche ma yabụ na ha maara n'onwe ha mmegbu a na-eleta ụmụnne ha ndị nwoke. N'ihi ya, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ha, druids na-echekarị, bụrụ naanị ndị siri ike, na esiri ike ịhụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-asọpụta omimi nke ihe nzuzo ha.
Shaman na-agwa ndị mmiri okwu ozugbo. Ngwakọta amamihe na nguzogide ha na-eme ka ha bụrụ ezigbo ndị ndụmọdụ na ndị isi agbụrụ. N'ime agha shaman na-eji totems na ọgwụ eme ihe iji mezie ihe ndị na-akpali mmụọ ma kpasuo ndị ọgụ ndị ọzọ iwe na oke ike. Shaman gosipụtara mmekọrịta dị n'etiti agbụrụ agbụrụ na gburugburu ebe obibi ha.
Ndị Magi bụ ndị amoosu nke nnukwu ihe ọmụma na nkà. Adịghị ike ha n'anụ ahụ bụ aghụghọ, n'ihi na ha nwere ike ịkpọku ume zuru ụwa ọnụ nke Twisting Nether. Ndị na-adịghị ahụkebe na-etinye aka na ọgụ. Kama nke ahụ, ha na-ahọrọ ịlụ ọgụ site n'ebe dị anya, na-atụba ntu oyi na ọkụ na ndị iro ha na-amaghị.
Dabere na gburugburu ebe obibi na ihe dị n'akụkọ ihe mere eme nke WoW, ndị avata nwere ike ijikọta na otu nke nha dịgasị iche maka ọgụ megide ọtụtụ ndị iro. Ndị otu kachasị dịkarịsịrị dị iche iche dị ise, otu na-eje ozi dị ka onye nhazi mana ndị otu niile na-arụkọ ọrụ n'ihe gbasara ekewa ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, onye agha nwere ike ịwakpo onye iro ya na ọgụ dị egwu, ebe mage na-eme ihe ọjọ na-emerụ ahụ megide onye iro, onye ụkọchukwu na-agbagha ọgwụ maka onye agha. Groupstù ndị na-awakpo oge gboo nwere ike ịbụ ọtụtụ avatars iri anọ, n'ime asatọ dị ise, yana onye ndu mwakpo na-eduzi ihe niile mmadụ iri anọ na nkwukọrịta kpọmkwem na ndị isi nke otu asatọ ahụ. Ọ dị na mbido ma bụrụ nke a na-ahụkarị na akụkọ ihe mere eme nke WoW, ọtụtụ agha otu ìgwè mere na mpaghara ewepụtara maka ebumnuche ahụ, ebe ọgụ ndị ọzọ a na-akọkarị na mmalite afọ na-abụkarị ịwakpo obodo ma ọ bụ obodo nke akụkụ ndị iro.
The Gua Alea Iacta Est nke nyere aka na ọgbakọ sayensị sayensị 2008 na WoW gosipụtara etu ụdị otu a ga-esi baa ụba. O sitere na pọdkastị metụtara WoW na 2007 wee toro ndị 6,600 site na afọ 2000 mgbe etinyere teknụzụ nke 1,000 na guild niile. Yabụ, AIE zara site na nkewa n'ime ọtụtụ guild na ịmepụta mmemme mgbakwunye akpọrọ GreenWall nke mere ka ndị otu ha niile nwee ike ikwurịta okwu ma gbakọta na WoW. Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, AIE nwere guilds na MMO ndị ọzọ a ma ama, yana otu mkparịta ụka mkparịta ụka Facebook na ndị otu 102. Ọtụtụ ìgwè ndị ọzọ gbadoro anya na WoW na-arụsi ọrụ ike na Facebook, gụnyere mmadụ abụọ nwere otu aha, World of Warcraft, na ndị otu 66,557 na 110,510, ebe otu abụọ ọhụụ maka ndị egwuregwu nke WoW Classic nwere ndị òtù 22,821 na 17,035.
The Nsogbu Mmeba nke afọ 2010 gbara ọkụ n’ọhịa na mpaghara ndịda ndị Night Elves jidere, na mbọ a na-agba iji kwụsị ya adaala kemgbe ahụ. Ofufe Elune na-eche ọtụtụ ndị asọmpi n'etiti agbụrụ ndị ọzọ, Night Night na-agbasakwa ịnọpụ ma zere ime ntọghata ma ọ bụ ịbụ onye a tọghatara. Otú ọ dị, ihe ịma aka bụ́ isi bụ ọdịdị okpukpe. Dị ka ihe ịrịba ama nke mmebi nke okwukwe Elune, Nsogbu kwere ka Night Elves bụrụ ndị isi.
Ndị ezigbo mmekọrịta enyi na Night Elves bụ ndị mmadụ, ndị na-azọrọ na ha na-efe Onyenwe anyị nke Ìhè, belụsọ na ha anaghị akọwapụta Onyenwe anyị dị ka chi. Na obodo Stormwind, Katidral nke Ìhè mebiri, chọrọ nrụzigharị, yana o doro anya na achịbishọp na ndị isi ndị ọzọ kpebiri ịghara inye nsogbu ịkwụ ndị ọrụ ha goro ọrụ, na-ebute obere nnupụisi. Dị nnọọ ka Darnassus nwere oflọ Nsọ nke Ọnwa maka ndị ụkọchukwu na Cenarion Enclave maka druids, Stormwind nwere Katidral nke Ìhè maka ndị ụkọchukwu, na Mage Quarter maka ndị mages. Night Elves nwere ike ịjụ ma okpukpe nke ụmụ mmadụ ọ bụ naanị mkpuchi maka akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha nwekwara ike iche na ndị ụkọchukwu nke Elune nwere ike ịbụ ndị mkpakọrịta ndị ụkọchukwu nke Light.
Otu oke otu okpukperechi nke Ìhè bụ Agha Ntụcha Na-acha uhie uhie, nke na-achọ ịsacha Azeroth nke mmadụ ọ bụla nke laghachiri n'ọnwụ, ọkachasị agbụrụ agbahapụ nke ndị Horde. Dị ka ụmụ mmadụ, ndị agbaghapụrụ gụnyere ndị ụkọchukwu na ndị isi, nke na-egosi na ọdịbendị ha adịchaghị iche.
N'ime Horde, ndị Tauren nwere ọdịbendị ọdịnala kachasị nke agbụrụ anọ mbụ, nyere na Orcs bụ ndị mbuso agha, Forsaken bụ Undead, na Trolls adabala n'oge ochie mgbe mbibi nke ọtụtụ mmepeanya ha. Tauren na-ejikọ mmekọrịta mmekọrịta ha na Orcs na Night Elves n'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ nwere ike bụrụ naanị ndị otu nke otu ha nwere ikike dị iche iche.
The 2016 ndi luru agha mgbasawanye nke WoW gbaghaara Legion Legion nke kpatara nnukwu ọrụ maka ọdịda oge ochie nke mebiri mmepe Elven. Ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ nke ndị mmụọ ọjọọ na-achọ ibibi ndụ niile, wee mepụta otu klas ọhụụ nke avatar, nke a na-akpọ ndị na-achụ nta mmụọ ọjọọ, iji lụso mwakpo ọhụrụ ha ọgụ. Naanị Elves nwere ike ịrụ ọrụ a, Night Elves n'ime Alliance na Blood Elves n'etiti Horde. Isi WoW website na-akọwa ha n'ụzọ dị otú a:
Ndị mmụọ ọjọọ na-achụ nta, ndị na-eso ụzọ Illidan Stormrage, na-akwado ihe gbara ọchịchịrị, nke na-atụ ndị ha na ndị iro ha ụjọ. Ndị Illidari na-anabata anwansi na anwansi ndị siri ike - ike ndị na-eyi ụwa Azeroth egwu ogologo oge - na-ekwenye na ha dị mkpa iji maa aka na Legion Legion. N'iji ike nke ndi mo ojo ha gburu, ha na emeputa ihe ndi mo-ojo nke na eme ka ndi mmadu chegharia na egwu.
N'ezie, dị ka Night Elf mmụọ ọjọọ dinta na-ejegharị site na obodo nke nkịtị Elves, otu ma ọ bụ onye ọzọ n'ime ha nwere ike ịkatọ nhọrọ nke avatar nke klas ahụ na-adịghị mma. Ọ bụghị otú ahụ maka ndị na-achụ nta mmụọ ọjọọ n'etiti Blood Elves, otu n'ime ha ka egosiri ebe a [Foto dị n'aka nri].
Na ụdị kpochapụwo nke WoW, avatar ga-arịgo ubube nke ahụmịhe ruru ogo iri isii, nke kachasị wee bụrụ 110 na ndi luru agha mmeba. Otu onye mmụọ ọjọọ mmụọ adịghị mkpa ka ọ rụọ ọrụ niile site na ọkwa, n'ihi na ha malitere na ọkwa iri itoolu na asatọ, na usoro pụrụ iche nke ga-eme ka ha ruo 100. Onye ọkpụkpọ nwere ike ịnwe otu dinta mmụọ ọjọọ na-enye alaeze, ma ọ ga -rịrịrịrị rụọ ọrụ ọzọ ruo ọkwa iri asaa iji nweta nhọrọ ahụ. Yabụ, ndị egwuregwu ndị ọzọ ekwesịghị inwe anyaụfụ ma ọ bụ weso onye ọkpụkpọ nwere mmụọ mmụọ ọjọọ ọgụ, mana ezi uche ndị avata na NPCs ga-eche na ike anwansi nke mmụọ ọjọọ adịghị mma. N'etiti Night Elves kwesịrị ntụkwasị obi, onye mmụọ ọjọọ na-achụ nta so n'agbụrụ nke ha nwere ike ịdị ka arụ.
Dịka o siri masị gị, World nke Warcraft nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ụwa anyị "dị adị", nke yiri ka ọ na-eji nwayọ agbadata ka ọgba aghara yiri nke a, na-ekewa n'otu ndị na-emegide mmadụ ma mba ma mba ụwa. Okwesiri icheta na nke Richard Wagner Der Ring nke Nibelungen na nke JRR Tolkien Jehova nke Mgbaaka bụ ilu ndị dị omimi, ọ bụghị nanị ihe oriri efu.
Foto # 1: Otu nwa akwụkwọ Tauren nọ n'ụkwụ arch druid Hamuul Runetotem, na Okenye na-ebili na obodo Tauren nke Thunder Bluff.
Image # 2: Otu abalị Elf onye nchụàjà na-eguzo n'otu n'ime ọnwa ndị dị nsọ.
Foto # 3: Night Elf na-eguzo na mbara ihu nke Templelọ Nsọ nke Ọnwa, n'etiti Malfurion Stormrage, onye guzobere akụkọ ihe mere eme nke druids, na nwunye ya, Tyrande Whisperwind, onye isi nchụ aja nke chi nwanyị Elune.
Foto # 4: Onye na-achụ nta mmụọ Elf.
Bainbridge, William Sims. 2010a. Worlds Online: Ngbanwe nke Real na Virtual. London: Mmiri.
Bainbridge, William Sims. 2010. Agha nke Warcraft: Social Science na awa Mebere. Cambridge, MA: MIT Press.
Bainbridge, William Sims. 2016. Virtual Sociocultural Convergence: Human Sciences nke Egwuregwu Kọmputa. London: Mmiri.
Castronova, Edward. 2005. Sịntetik swa: Azụmaahịa na Omenala nke Egwuregwu Online. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Ridgelọ akwụkwọ, Samuel Taylor. 1817. Akwụkwọ biographia. New York: Kirk na Merein.
Bartle, Richard. 2004. Mepụta twa Mebere. Indianapolis, IN: Ndị ọhụụ ọhụrụ.
Knaak, Richard A. 2005. Eringbọchị Sundering. New York: Akwụkwọ akpa.
Knaak, Richard A. 2004a. Olulu Mmiri nke Ebighị Ebi. New York: Akwụkwọ akpa.
Knaak, Richard A. 2004b. Mkpụrụ Obi Mmụọ Ọjọọ. New York: Akwụkwọ akpa.
Metzen, Chris. 2002. “Ọbara na Nsọpụrụ.” Pp. 545-613 mu Ebe a na-edebe agha. New York: Akwụkwọ akpa.
Nardi, Bonnie A. 2010. Ndụ m dị ka onye nchụàjà Elf Night: Otu akụkọ ihe mere eme nke World of Warcraft. Ann Arbor, MI: Mahadum nke Michigan Press.
Wikipedia. "Blizzard Ntụrụndụ." Nweta site na https://en.wikipedia.org/wiki/Blizzard_Entertainment na 10 September 2019.
WoWpedia, “Elune.” Nweta site na wow.gamepedia.com/Elune na 10 September 2019.